မော်တင်စွန်းခရီးစဉ် (၃) ငွေတောင်ကမ်းခြေအလှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မော်တင်စွန်းခရီးစဉ် (၃) ငွေတောင်ကမ်းခြေအလှ
မော်တင်စွန်းခရီးစဉ် (၃) ငွေတောင်ကမ်းခြေအလှ
Posted by weiwei on Mar 1, 2012 in Photography, Travel | 20 comments
နေ့လည် ၂ နာရီလောက် ရေကျချိန်မှာ ငွေတောင်ကမ်းခြေဆီကို သွားလည်ခဲ့ကြတယ်။ ၇ မိုင်ခရီးကို ကမ်းစပ်ကနေ ကားစီးသွားရပါတယ်။ လမ်းတွေမညီမညာမှာကားခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ စီးသွားရတာမို့လို့ ပြုတ်မကျအောင် ခါးမနာအောင် ကားမမှောက်သွားအောင် ဘုရား တရား တရင်းနဲ့ ငွေတောင်ကမ်းခြေဆီကို ရောက်သွားပါတော့တယ် …
ငွေတောင်ကမ်းခြေရောက်တော့ ဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ငါးခြောက်သည်တွေအများကြီးပဲ။ အုန်းစိမ်းရေ၊ ရခိုင်မုန့်တီနဲ့ အသုတ်ဆိုင်လေးတွေမှာ လူတွေစည်ကားနေပါတယ်။ နေပူနေတုန်းမို့ ဆိုင်တစ်ခုထဲဝင်ပြီး အုန်းစိမ်းရေသောက်ရင်း ခဏနားလိုက်ကြတယ်။ ပင်လယ်ရေစိမ်ပြီးရင် ရေချိုးပြန်ချိုးလို့ရပါတယ်။ ရေအ၀ချိုး ၅၀၀ ကျပ်တဲ့။ လက်နှိပ်တုန်ကင်လေးတွေနဲ့ ရေချိုရကြပါတယ်။ ဘုရားပွဲ ၁၅ ရက်တာမှသာ ငွေတောင်ကမ်းခြေကိုလဲ သွားနိုင်တာမို့ တစ်နှစ်မှာ ၁၅ ရက်တာပဲ ရေကစားနိုင်တဲ့ ငွေတောင်ကမ်းခြေအလှက အမှတ်တရဖြစ်လောက်အောင် လှပါပေတယ်။ သွားရောက်ဖို့ မလွယ်တဲ့နေရာမို့လို့ ကမ်းစပ်မှာ တ၀ကြီးလမ်းလျှောက်ရင်း ရေထဲမှာလဲ အကြာကြီး ရေစိမ်ခဲ့လိုက်တယ်။ ငွေတောင်လို့နံမည်မှည့်ခေါ်ရလောက်အောင် သဲလေးတွေက ငွေတောင်တလက်လက် တောက်ပနေကြတယ်။ သဲမာမာလေးတွေပေါ်မှာ ဖိနပ်မပါပဲ လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အရသာက စာနဲ့ရေးပြလို့မရလောက်အောင် ကောင်းလွန်းပါပေတယ်။
ရေစပ်စပ်မှာ လမ်းလျှောက်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်
ရေထဲမှာ ၀အောင်စိမ်လိုက်ကြပါတယ်။ ပင်လယ်ရေက ကြည်လင်ပြီး နွေးနေတယ်။ လှိုင်းစီးရတာ ညိမ့်ညိမ့်လေးနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ရေငံပေမယ့် တခြားကမ်းခြေတွေထက် အငံဓါတ်လျော့နေပါတယ်။ ထူးခြားတာက ဘုရားဖူးတွေများပြီး ဘီကနီဝတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ရေချိုပြန်ချိုးရတာတော့ ဒုက္ခနဲနဲရောက်ပါတယ်။ လူတွေကများပြီး အ၀တ်လဲဖို့နဲ့ ရေချိုးခန်းသီးသန့်မရှိတာမို့ သိပ်တော့အဆင်မပြေလှဘူး။ ရေချိုးပြီးနောက် ဘုရားလေးတစ်ဆူရှိရာဘက်ကို လမ်းလျှောက်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တယ်။ ငါးဖမ်းလှေကလေးတွေရပ်ထားတဲ့ရှုခင်းလေးက အရမ်းသန့်ရှင်းကြည်လင်နေပါတယ်။ လှလိုက်တာ လှလိုက်တာလို့ တဖွဖွပြောမိရလောက်အောင်ကို လှပါပေတယ် …
ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ထိုင်ကြည့်နေရသလိုပဲ ..
လှေကလေး ဒီလောက်လှလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ မတွေးခဲ့မိဘူး
ကျွန်မရောက်ဖူးသမျှ ကမ်းခြေတွေထဲမှာ ငွေတောင်ကမ်းခြေက အလှဆုံးနဲ့ အသန့်ဆုံးပါပဲ …. ကမ်းစပ်မှာ ဘုရားလေးတစ်ဆူရှိနေတာကလဲ ပင်လယ်နဲ့စေတီ အလွန်ပနာရပါပေတယ် …
ဒီပုံလေးနဲ့ဆို ဓါတ်ပုံဆရာ ဖြစ်နိုင်ပြီလား ??
ဟိုးအဝေးကြီးက တော်ပေါ်ကစေတီလေး (အောင်တော်မူစေတီ)
ညနေ ၅ နာရီခွဲမှာ မော်တင်စွန်းကို နောက်ဆုံးထွက်မယ့်ကားတစ်စီးနဲ့ ဘုရားဆီကို ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့ မသေချာတဲ့နေရာတစ်ခုမို့ ရှုခင်းတွေကို တစ်ဝကြီးကြည့်လာခဲ့လိုက်တယ် … ဓါတ်ပုံတွေ အများကြီးရိုက်လာခဲ့ပေမယ့် အကုန်တင်ဖို့ အခက်အခဲရှိတာကြောင့် လှမယ်ထင်တာလေးတွေပဲ ရွေးတင်လိုက်ပါတယ် …
အပိုင်း (၄) နဲ့ အပြန်ခရီးစဉ်ရေးပြီးရင်တော့ မော်တင်စွန်းခရီးစဉ် ပြီးပါပြီ …
ဒီပုံတွေရဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူး …
တော်တော်တိုက်ဆိုင်မှုတွေများမှသာ အဲဒီနေရာကို အဲဒီအချိန်မှာ ရောက်နိုင်တုန်းလေး ရိုက်ခဲ့ရတာမို့လို့ …
ရွာသူားတွေအားလုံးကို တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်စေချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်မိတယ် …
မမဝေရေ ခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေက အရမ်းလှတယ်
အနီးကပ် လှိုင်းလုံးလေးတွေရယ် ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ထိုင်ကြည့်နေရသလိုပဲ ..ဆိုတဲ့ပုံလေးရယ်
အကြိုက်ဆုံးပဲ .. ကြည့်ယုံမဟုတ်ပဲ ကူးပါကူးသွားတယ် ..
မဝေရေ၊ မော်တင်စွန်းခရီးစဉ် အတွက် တစ်လက်မပါဗျို့။ ပုံလေးတွေကတော့ တစ်ကယ်ကို မဝေ အလင်းနဲ့ရေးလာတဲ့ ပန်းချီကားလေးတွေပါဗျာ။ မြင်တတ်ပါပေတယ်။ ရိုက်ချက်တွေကတော့ ခလုပ်တိုက်တာတောင် “ငွေရောင်တလက်လက်နဲ့ သဲမှုန်လေးတွေ” ဖြစ်သေးတယ်နော်
ဓါတ်ပုံဆရာဆီက ချီးကျူးစကားကြားရလို့ ဘ၀င်တောင်မြင့်သွားပြီ …
သဘာဝက လှလွန်းတော့လဲ ဘယ်လိုပဲ ရိုက်ရိုက် လှနေတော့တာပါပဲ ….
ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အားကျမိတယ်။
ငွေတောင် ဆိုတာ ကြားသာ ကြားဖူးခဲ့တာ.. ၁နှစ်မှာ ၁၅ရက်ဆိုတော့ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးနော်.. အားတဲ့ ရက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှ အဆင်ပြေနိုင်မှာ ဆိုတော့ သွားလည်ဖို့ကို လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတော့ဘူး။
ပုံပဲ ကြည့်ပြီး စိတ်ကျေနပ်လိုက်တော့မယ်။
ထိုင်ငေးကြည့်စရာအလှတွေနဲ့ ကမ်းခြေလေးရယ်၊နွားလှည်းလေးရယ်(ငပလီမှာ ပွဲလုပ်မှတွေ့ ရတတ်)
နာဂစ်တုံးကအဲဒီနေရာတွေလဲထိခိုက်မှူရှိမယ်ထင်ပါရဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ် မှာဘီကီနီမတွေ့ရတာကတော့ တခုခုလိုနေသလိုပဲ (နောက်တာပါဗျိုး) ပုံတွေက ဒါ့ပုံဆရာတွေတောင်အရှုံးပေးရပါတယ်
လှိုင်းလုံးလေးတွေ အနီးကပ် လို့
်သဲမှုန်လေး ငွေရောင်လက် ပေါ်က
ဒီလောက်လှလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ မတွေးခဲ့မိတဲ့လှေကလေး ရယ်…
ကမ်းစပ်က စေတီလေး အနားမှာ
ဒီလိုဆိုတော့ တကယ်ကဗျာဆန်သွားတာပဲနော် .. ကျေးဇူးပါ …
ဝေေ၀ ရဲ့ ပုံစာလေးတွေ ကောင်းလို့
အန်တီဝေ ရေ ကျွန်တော်လဲ ၀င်ကြည့်သွားပါတယ်
ွကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ၃ ပုံလောက်ပဲ တွေ့ရသေးတယ်
refresh ထပ်လုပ်လိုက်ရင် တော့ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာကောင်းပါရဲ့
ပေါ်တဲ့ ပုံတင် တော်တော် ကြည့်ကောင်းတာပဲ
အဲ တစ်ပုံ လိုနေသလားလို့………………………….
ပို့စ် ပိုင်ရှင် ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ ပုံလေး
refresh ထပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ပေါ်လာ မလား ထပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
ဒုတိယပြောရရင် မနာလိုဘူး(ရောက်ဘို့ မလွယ်လို့)
တတိယအနေနဲ့ပြောရရင် နောက်တစ်ခါ ဟန်းနီးမွန်းထွက်ရင် အဲဒီကိုသွားမယ်ဗျာ။.
(ဒါတော့ မနာလိုမရှိနဲ့ မဒမ်ပေါက်နဲ့သွားမှာ)
အမဝေ ရေ …
ကျနော်လည်း အားပေးသွားတယ်နော် …
ပုံလေးတွေက အရမ်းလှတယ်၊ ပန်းချီဆန်ဆန် ပုံလေးတွေကိုလည်း ကျနော် ယူသွားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ခွင့်တောင်းရင်း အသိပေးပါရစေဗျာ ……..
သဘာဝရဲ့ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီတဲ့ အလှကို ပေါ်လွင်အောင် မှတ်တမ်းတင်လိုက်နိုင်တော့
တချိန်တခါကနေ ထာဝရအမှတ်တရလေးတွေ ဖြစ်သွားရတာပေ့ါ။
`သဘာဝ ဟာ ပကာသန မပါ
တစ်ခါက မှ ထာဝရ သို့
အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီ ….. ´
ဒီလောက်လှလိမ့်မယ်လို့ မထင်တဲ့ လှေကလေးပုံက
အဲဒီပုံလေးကိုတော့ သူကြီးမ၀ယ်ရင်တောင် ကျွန်တော် ၀ယ်လိုက်ပါမယ်။
ဈေးကတော့ လက်မလေး တစ်ချောင်းပါဗျာ။
ပုံလေးတွေကတကယ်ကိုလှပါ ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်နေသလို ညီမခံစားရပါတယ် သဲလေးတွေကတကယ်ကို ငွေရောင်တောက်နေပါတယ်ဒီလိုရှုခင်းကောင်းလေးတွေကြည့်ခွင့်ရတာကျေးဇူးပါကြည့်လို့ကိုမ၀ပါဘူး ခဏခဏပြန်ကြည့်မိနေပါတယ်ပုံလေးတွေကအရမ်းလလည်းလှပါတယ်
မန့်တိုင်းက အရမ်းလှတယ် လှတယ်ဆိုတဲ့ ပုံတွေမမြင်ရတဲ့ချိန်မှ ဒီကဖတ်မိတာဆိုတော့
ဟီး.. anyway thank u !
၂၀၁၂ က တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်တွေပဲ။
မြတ်ပဲဖြူ ပြန်တူးဖော်လို့သာ တွေ့ရ။
ပုံတွေ မမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့ စာပဲဖတ်ရင်းးးး
သွားကြည့်ချင်လာတယ်။ ချောင်းသာ ငွေဆောင်ထက် သန့်ရှင်းပြီး လှနေအုန်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပေါ့။